Ukucatshangelwa Okusemqoka Lapho Kukhethwa Izinhlelo Zokukhomba (POS) | Martech Zone
Ukucatshangelwa Okusemqoka Lapho Kukhethwa Izinhlelo Zephoyinti Lokuthengisa (POS)
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 27, i-2019 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 27, i-2019 Douglas Karr
Izixazululo zePoint of sale (POS) zazikade zilula, kepha manje sekunezinketho eziningi ezahlukahlukene, ngayinye enikeza izici ezihlukile. Ukuqina insizakalo yephuzu lokuthengisa kungenza inkampani yakho isebenze kahle kakhulu futhi ibe nomthelela omuhle kulayini waphansi.
A Iphoyinti Lokuthengisa Uhlelo luyinhlanganisela yehadiwe nesoftware eyenza umthengisi akwazi ukuthengisa nokuqoqa izinkokhelo zokuthengiswa kwendawo. Izinhlelo ze-POS zanamuhla zingasuselwa kwisoftware futhi zingasebenzisa noma iyiphi ifoni ephathekayo ejwayelekile, ithebhulethi, noma ideskithophu. Amasistimu we-POS wendabuko ngokuvamile afaka i-hardware ephathelene nokuxhaswa kwesikrini sokuthinta nokuhlanganiswa kwedrowa yemali.
Lo mbhalo uzofaka konke odinga ukukwazi ukuze ukhethe isoftware yokuthengisa efanelekayo yebhizinisi lakho. Njengoba kunezixazululo eziningi ezahlukahlukene, kubalulekile ukwenza ucwaningo kusengaphambili futhi ukhombe olufana nezidingo zomkhiqizo wakho.
Ingabe Kudingeka Ngempela Iphuzu Lokuthengisa?
Amanye amabhizinisi azama ukunciphisa izindleko ngokwenza ngaphandle kwesixazululo sendawo yokuthengisa, kepha lokhu kutshalwa kwezimali kunamandla yenzela inkampani yakho imali. Inani elincane olichitha ekubhaliseni alilutho uma liqhathaniswa nesikhathi nemali ozoyonga nsuku zonke zokusebenza.
Ngaphezu kokwenza lula ukuthengiselana, izinhlelo zokusebenza zesikhathi samanje zokuthengisa zinikela ngamathuluzi amaningi aklanyelwe ukwenza zonke izici zebhizinisi lakho ziqhubeke kahle. Uma ufuna ukugxila ebudlelwaneni bamakhasimende, ngokwesibonelo, ungathola izixazululo zephoyinti lokuthengisa ezibandakanya izinhlelo zokwethembeka nezinye izinto ezibalulekile. Ngaphezu kwalokho, izinsizakalo eziningi zihlangana ngaphandle komthungo nezinye izinhlelo zokusebenza ezidumile njengeShopify neXero.
Izinhlelo ezihlukile zamabhizinisi ahlukene
Izinsizakalo zePhoyinti lokuthengisa zikhomba isethi yezinkampani ezahlukahlukene kufaka phakathi abathengisi abaku-inthanethi namabhizinisi anezitolo ezibonakalayo. Unalokho engqondweni, akufanele ube nenkinga yokuthola inketho efana nesabelomali sakho nosayizi womkhiqizo wakho.
Ngokuqhubeka ngokwengeziwe, amasistimu amaningi aya ngokuya enkambisweni esuselwa emafini ebeka imininingwane endaweni eyodwa ngokuyixhuma kunoma iyiphi idivayisi. Ngenkathi izinhlelo zendabuko zisatholakala, izindlela ezenzelwe ifu ziya ngokuya zanda.
Ukucatshangelwa Okuyisihlanu Lapho Kukhethwa i-POS
Hardware - Izinhlelo ezahlukahlukene zokuthengisa zenzelwe ukusebenza nezinhlobo ezahlukahlukene zehadiwe, futhi udinga ukubheka izindleko zehadiwe uma uqhathanisa izinketho zakho. Uma ukwazi ukusebenzisa i-POS ngefoni nje, ngokwesibonelo, ulungisa ukusebenza ngenkathi ungeza ngaphezulu kokuncane. Ngakolunye uhlangothi, ezinye izinhlelo zisebenza kangcono namathebulethi noma amadivayisi azinikele, okungaholela ezindlekweni ezinkulu kakhulu. Ngaphezu kwalokho, amabhizinisi amakhulu nezindawo zokudlela kaningi zidinga uhla olubanzi lwe-hardware, kufaka phakathi izinto ezifana namaphrinta wamarisidi, ama-terminals okuphathwa kwetafula, nokuningi.
Izinkokhelo Zokukhokha - Ukuthenga uhlelo lwe-POS akusho ukuthi uhlanganise izindlela zokukhokha ikhadi lesikweletu. Ngenkathi amasistimu amaningi we-POS ezalelwe ngaphambili umfundi wekhadi lesikweletu, amanye angadinga ukumiswa, okungakubiza. Thola i-POS ngesifundi sekhadi esihlanganisiwe noma esisodwa esingahlanganiswa nesifundi sekhadi lesikweletu kusuka kumprosesa wakho wokukhokha kanye nomasango.
Ukuhlanganiswa kweqembu lesithathu - Amabhizinisi amaningi asevele asebenzisa amathuluzi amaningi wokukhiqiza, futhi kubalulekile ukuthola insizakalo yokuthengisa esebenza kahle ngemikhuba yakho ekhona. Ukuhlanganiswa okudumile kufaka izinhlelo zokubalwa kwezimali, amasistimu wokuphathwa kwabasebenzi, amasistimu wempahla, amasistimu wokwethembeka kwamakhasimende, nezinsizakalo zokuthumela. Uhlelo lokuthengisa lwe-Square, ngokwesibonelo, luxhuma ezinhlobonhlobo zamapulatifomu wesithathu wayo yonke into kusuka ku-eCommerce kuya kwezokumaketha kanye ne-accounting. Ngaphandle kokuhlanganiswa, ukungeza izinsizakalo ezintsha kumasu enhlangano yakho kungaxaka imisebenzi engadingekile ngokungadingekile. Izinhlelo zokuthengiswa kwephoyinti zimayelana nokusebenza kahle, ngakho-ke kuyaphazamisa ukusebenzisa ipulatifomu engaxhumani nezinye izinhlelo zokusebenza. Isibonelo, ukungenisa ngokuzenzakalela okwenziwe kusevisi yokubala kusebenza kakhulu kunokukudlulisa ngesandla phakathi kwezinhlelo zokusebenza.
Security - Abathengi bathatha ubumfihlo babo ngokungathí sina kunanini ngaphambili, futhi ama-hacks wedatha ajwayelekile ngokumangazayo phakathi kwamabhizinisi abo bonke osayizi. Abaphathi bavame ukubukela phansi ukubaluleka kokugcina idatha ivikelekile, futhi lokhu kubaluleke kakhulu uma amakhasimende ehlinzeka ngolwazi olubucayi olufana nezinombolo zekhadi lesikweletu. I- Imboni Yekhadi Lokukhokha ichaza izindinganiso zokuphepha ezinengqondo zamasistimu wamaphuzu wokuthengisa nezinye izindlela zokucubungula izinkokhelo. Izinhlelo ezaziwayo ngokuvamile ziyahambisana nalawa mazinga, kepha futhi ungabheka ukuvikelwa okuqinile, njengokufakwa kwedokhumende yedatha bese uqeda ukubhala ngemfihlo. Ezokuphepha kufanele zibe ngenye yezinto eziza kuqala kuwe uma ufuna uhlelo lokusebenza lwe-POS oluthembekile.
Amaprosesa asekelwe - Ungahle ungacabangi ngokusekelwa njengesici esibucayi, kepha inethiwekhi yokuxhasa kabi ingenza uhlelo lwakho lokuthengisa lube nzima kakhulu ukulusebenzisa. Izinketho ezinokwethenjelwa zinikeza ukusekelwa okungaguquguquki futhi zikusize uxazulule izinkinga ngaphambi kokuba zibe nomthelela omubi ebhizinisini lakho. Uma kunokwenzeka, kufanele ubheke insizakalo enikezela ukwesekwa okungu-24/7. Kubalulekile ukwazi ukuthi othile uzophendula noma kunini lapho unenkinga ngohlelo. Ezinye izinhlelo zize zinikeze abasebenzisi abasha usizo lwesiza njengoba besetha insiza okokuqala. Amabhizinisi amancane avame ukubeka imali ekuthengiseni isisombululo, kodwa ukubhaliswa kwekhwalithi ephezulu kungakufanele izinkampani zanoma yisiphi isayizi. Lezi ngezinye nje zezici ezifanele kakhulu okufanele uzikhumbule lapho uqhathanisa izinsizakalo zokuthengisa.
Tags: I-POS yamafupos esuselwa efwinipos mobileisango lokukhokhaPOSpos hardwareisoftware posisikrini sokuthinta